देउवाले बोलाएको बैठक पौडेल र प्रकाशमानले किन गरे बहिस्कार ? Nepalpatra देउवाले बोलाएको बैठक पौडेल र प्रकाशमानले किन गरे बहिस्कार ?
काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी रहेको छ । बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको बैठक पौने २ बजेदेखि मात्र शुरु भएको हो ।
तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका साथै प्रकाशमान सिंहले पनि पार्टीको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गरेका छन् । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एकदिन अघि मात्र बस्न लागेको कांग्रेसको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेल र सिंह नगएका हुन् ।
भोलि शुक्रबारदेखि काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन शुरु हुँदैछ । तर जारी उक्त बैठकमा आफू सहभागी नहुने काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवालाई जानकारी गराएका छन् ।
आजको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लेखा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गर्नुका साथै १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको अन्तिम बैठक भएकाले सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति देउवाले पदाधिकारीमा दाबी गर्ने आकांक्षीहरुलाई मिलाउन पदाधिकारीको संख्या थप्ने तयारी गरेपछि पौडेल र सिंहले आज देउवाले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक बहिस्कार गरेको बुझिएको छ ।
पौडेलनिकट स्रोतका अनुसार एक महिला उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्री थप गर्ने तयारी सभापति देउवाले गरेका छन् । देउवाले आज जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नै पदाधिकारी थपको प्रस्ताव लैजानेसमेत तयारी गरेका थिए ।
तर संस्थापनइतर पौडेल समूहले पदाधिकारी थप्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छैन । सो विषयको सूचना पाएपछि पौडेलले बैठक नै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । पौडेलनिकट स्रोतका अनुसार पदाधिकारीको संख्या थपको विषयमा नेता पौडेलको असन्तुष्टी रहेको र बैठकमा नजाने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
आजकै बैठकमा पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्य समेत थप्ने प्रस्ताव लैजाने गृहकार्यमा रहेको देउवा पक्ष बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिंह अनुपस्थित भएपछि सो प्रस्तावबाट पछि हटेको छ ।
यस्तै हिजोमात्र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो समूहवाट सभापति पदको लागि सबै लड्ने भए आफू पार्टीबाटै अलग भएर राजनीति छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । संस्थापनइतर आफ्नो समूहबाट सभापति पदको उम्मेदवार टुंगो लगाउन चाक्सीबारीस्थित प्रकाशमान सिंहको निवासमा भएको बैठकमा पौडेलले सभापतिमा साझा उम्मेदवार बनाउन नसक्ने हो भने आफूलाई पार्टीबाटै विदा हुने बताएका थिए ।